16 Kavina baja vy tsy mihetsika izay napetraka ao amin'ny Tetikasa Kabinetra Parcel-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
16 Ketsika Stainless steel Keypad napetraka ao amin'ny Tetikasa Kabinetra Parcel
Fotoana: 2020-08-19 Hits: 47
Ny rafitry ny kabinetra an'ny saina, ao anatin'izany ny solosaina indostrialy, izay mifamatotra amin'ny 16 bokotra vy matevina, QR code scanner, touch touch, QR code printer, electronic electronic control board, server; Napetaka ny birao fanaraha-maso elektrika elektrika ao amin'ny kabinetra Ny hidia elektronika dia mifandray, ny mpizara dia mifandray amin'ny terminal WEB solosaina na APP finday.
Fa maninona no misy cabinets firy amboary apetraka sy ampiasaina?
1.Eny hametahana ny fandefasana entana marobe avy amin'ireo mpandray an-tanana, ary manatsara ny fahombiazan'ny orinasa sendika.
2.Ny fiarovana samirery sy fiarovana manokana an'ny mpandefa sy mpandray dia voaro, ary mety ho an'ny mpandefa sy ny mpandray izany ny mandefa sy haka amin'ny fotoana rehetra.
3. Ireo mpanera dia afaka mitahiry mandritra ny fotoana voafetra ireo entana tsy mora raisina rehefa mandeha ao amin'ny kabinetra faran'izay marani-tsaina, ary esory rehefa mety izany.
4.Ny mpampiasa dia tsy mila andalana eo amin'ny terminal mba hidirana sy handoa. Azon'izy ireo atao ny mametraka baiko ary mandoa amin'ny alàlan'ny WEB na solosaina finday APP, hialana amin'ny olan'ny fihenam-bava.
5. Ao anatin'ny fizotry ny fandefasana, ny fizarana ary ny fandraisana, ny mombamomba ny mpandefa sy mpizara dia mitrandraka hatrany amin'ny endrika QR code, izay tena misoroka ny fihoaran'ny mombamomba ny mpampiasa ary mampitombo ny fahombiazan'ny fanaterana sy ny fidinana.
Ahoana ny momba ny keypad stainless vy voamboarina Xianglong?
Ny fanalahidy dia voasokitra an-tariby, ka dia tsy ho levona tsikelikely intsony ny fanalahidy noho ny fotoana ela.
Ny tontonana sy ny bokotra dia vita amin'ny vy stainless 304, izay manana hery manohitra fanoherana manimba.
Fiainana fanompoana ≥ 2 tapitrisa
Ny keypad dia IP67 tsy fahita anaty rano, fanoherana ny fanodinana, ary fanoherana ny fanilihana.
Taloha: 4x4 16 bokotra metallic keypad natsofoka tao amin'ireo mpaninjara solika finday
Next: Fa maninona no manolo ny fangalarana valiny amin'ny antso an-tsary?